Beesha Caalamka oo kusii qul qualysa shir waynaha ka socda Ethiopia | raascasayrmedia.com
← Dowladda Itoobiya oo safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya iyo Sheekh Shariif oo aqbalay magacaabiddaas
Mubaarak oo kala Eryay Golihiisa Xukuumadda →
Beesha Caalamka oo kusii qul qualysa shir waynaha ka socda Ethiopia
Waxaa magaalada Addis’Ababa ee Xarunta dalka Ethiopia ka soconaay kulan ay yeesheen Madaxda Ururka Midwga Afrika kaasi oo wali ay kusii qul qulayaan Madax ka kale socota beesha Caalamka gaar ahaan Jimciyadda Qurumaha ka dhaxaysa.
Wararka ka imaanaya magalada Addis’Ababa ee Xarunta wadanka Ethiopia ayaa waxaa ay sheegayaan in halkaasi uu ka socdo kulan looga hadlayo dadaalada dib usoo celinta nabadda, amaanka xasiloonidii iyo waliba qabashada dib u hishiisiin qaran oo ka dhacda gudaha wadanka Soomaaliya.
Kulankaasi ayaa lagu wadaa in uu ka qaby galo Xoga hayaha guud ee Jimciyadda Qurumadaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon, gudoomiyaha Ururka Midowga Midowga Afrika Jean Bing iyo madaxda kale oo sar sare kuwaasi oo mar dhow lafilayo inay ka hadlaan xaaladda amniga ee faraha kasii baxaysa ee dalka Soomaaliya.
Ergayga gaarka ah ee Qamarada Midoobay u qaabilsan arimaha Soomaaliya Ambassador Mahiga ayaa war uu soo saaray waxaa uu ku sheegay in madaxdaasi maanta ay gaari doonaan Magaalada Addis’Ababa islamarkaana ay ku biiri doonaan kulanka Arbacadii lasoo dhafay ka furamay magaaladaasi.
“Waxaa naga go’an inaan sii amba qaadno taageeridda dowladda KMG iyo sidii loo horumarin lahaa xaladaha dhinaca bini’aadanimada ee ka jirta dalka Soomaaliya, Ururka Midowga Afrika iyo beesha Caalamka waxay bar bar taaganyihiin dalka Soomaaliya oo dhibaatooyin adag ka jira” ayuu yhiri Mr. Mahiga.
Ugu dambeyn Ambassador Mahiga ayaa ku nuux nuuxsaday in waqtiga u haray dowladda KMMG Soomaaliya uu yahay mid aad gabaabsi u ah islamarkaana waxaa uu daaha ka rogay in dowladda ay u dhimantahay mud 7-bil ah, isagoo sheegay inay bar bar istaagayaan Hay’adaha kala duwan ee dowladda KMG si mar un ay nabad ugu aslaaxdo wadanka Soomaaliya.